Fampianarana: Fototry ny Firenena iray
Misy fitenenana malaza hoe "Raha tiana ho potehina ny firenena iray, dia poteho ny fampianarana ao aminy", ary miampy ny hoe "Habadoy ny mponina ao", sy ny hoe "Poteho ny kolo-tsaina sy ny tantarany". Ny Malagasy dia tia mampiana-janaka, nefa tia mifidy mpitondra tsy nianatra.Toa mifanipaka ihany raha ny fijery ivelany. Ny tanora dia maka modely ireo olona lazaina fa tafita eo amin'ny fiaraha-monina, na mpanan-kanto io, na mpanao fanatajahan-tena, na olona mpanefoefo manan-karena ivelany. Matetika anefa ireny olona misongadina ireny, dia olona noheverina fa resy tantereka teo amin'ny fiaraha-monina, fa noho ny ezaka nataony, na noho ny antony maro dia tafavoaka ka dia malaza. Mety olona tsy nianatra firy matetika. Maro ihany koa ireo mpanao politika, na mpitondra, eny hatramin'ny député, minisitra, filoham-pirenena no tsy manana mari-pahaizana firy, fa tafita tamin'ny fiaraha-monina dia lasa modely, ary mamin'ny olona. Ireny anefa dia azo singanina anatin'ny maro, ka tsy azo atao filamatra na fitaratra, satria singa vitsy mihavaka na maningana ihany izy ireny.